बैंक बन्द हुँदा इन्टरनेट बैंकिङ्ग गर्दै हुनुहुन्छ ? त्यसोभए यी १२ बुँदामा ध्यान दिनुस् र सुरक्षित बन्नुस् - Technology Khabar
» बैंक बन्द हुँदा इन्टरनेट बैंकिङ्ग गर्दै हुनुहुन्छ ? त्यसोभए यी १२ बुँदामा ध्यान दिनुस् र सुरक्षित बन्नुस्
काठमाडौं । कोरोनाभाइरसको महामारी र संक्रमणको त्रासले गर्दा पछिल्लो दिनहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले इन्टरनेट बैंकिङ्ग वा अनलाइन बैंकिङ्ग सेवा प्रयोग गर्न सबैलाई भन्दै आएका छन् ।
अझ आजदेखि काठमाडौं उपत्यका भित्र र देशका विभिन्न स्थानहरुमा हुँदै आएको निषेधाज्ञा र लकडाउनले गर्दा बैंकहरुले आफ्ना सबै शाखाहरु बन्द भएको र नखुल्ने जानकारी दिएका छन् ।
अर्को तर्फ इन्टरनेटको सहजता र बैंकहरुले दिँदै आएको इन्टरनेट बैंकिङ्ग सेवामा मानिसहरुको आकर्षण बढिरहेको छ ।
नेपालमा पनि इन्टरनेट बैंकिङ्ग सेवाग्राहीको संख्या बढिरहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले नै देखाउँछ ।
तर सहज र सजिलो मानिएको इन्टरनेट बैंकिङ्गमा जोखिमहरु पनि उत्तिकै छन् ।
सबै बैंकले आफ्ना ग्राहकहरूलाई अनलाइन बैंकिङ्ग सुरक्षित गर्न धेरै सुझावहरू प्रदान गर्ने गर्दछ, तर यसको बावजूद धेरै व्यक्तिहरू धोखाधडीको शिकार हुने गर्दछन्।
ह्याकरहरु इन्टरनेट बैंकिङ्ग वा मोबाइल बैंकिङ्ग गर्नेहरुले केहि न केहि सानो गल्ती गरोस् भनेर कुरिरहेका हुन्छन्। जसले गर्दा मानिसहरुले आफ्नाो खाताबाट थाहा नपाईकन नै रकम गुमाउन सक्ने संभावना हुन्छ ।